Sida loo Beddelaan MOV in WMA?
> Resource > Beddelaan > Sida loo Beddelaan QuickTime MOV in WMA (Yosemite ka mid ah)
Waxaan ku badaley QuickTime file MOV in file WMA. Laakiin file WMA baan ka heli uusan haysan dhererka ka buuxaan file asalka. Waxaa la gooyay. Waxaan isku dayay dhowr jeer laakiin mar walba waxaan ka helay natiijo isku mid ah. Sidaas daraaddeed waxaan u doonayaan in ay ogaadaan in uu jiro hab kasta oo lagu kalsoonaan karo si loo soo saaro audio ka MOV oo aan wax ka lumay ama inaan la siin?
Haa, haddii aad raadiso internet, aad u badan oo ka heli kartaa QuickTime MOV in converters WMA in aad isticmaali karto si ay u gaadho MOV in ay diinta ka WMA. Laakiin dhab ahaantii, waxaa jira kuwa yar dhabta ah oo awood badan. Waxaad u badan tahay in uu yimaado ee guud ahaan xaaladda sida qofka kor ku sameeyey, inaad WMA badalo karaa MOV la qalab guud, laakiin lumay qaar ka mid ah qeybaha kala audio asalka.
Haddii ay sidaas tahay, waxaan si adag kuugu talinaynaa MOV xirfadle in WMA iyo gargaare diinta, ka soo saaro karaa WMA QuickTime MOV fudayd iyo hufnaanta iyo iyada oo aan wax tayo leh laga badiyay. Windows iyo Mac Version ee app this yihiin oo dhan laga heli karaa halkan adigoo gujinaya Link hoose.
Dadka isticmaala Windows, waxaad kala socon kartaa tutorial ah oo faahfaahsan hoos ka talaabo talaabo ah.
Talaabada 1: Import QuickTime MOV files si MOV in Converter WMA
Ku rakib oo ay maamulaan this MOV smart in WMA Video Converter . Markaasay aad u baahan tahay si ay u dajiyaan QuickTime MOV faylasha aad rabto in aad si loogu badalo in ay app this. Waxaad dooran kartaa mid ka mid ah saddex dariiqo oo hoos ku qoran:
1. Hit ee "badalo" menu in aad ku darto files MOV.
2. Si toos ah jiidi & daadiyaa mid ama ka badan MOV files si app this.
3. Riix "Add Files" in ay leeg- tahay tan app ee ay u dajiyaan MOV faylasha aad rabto in aad ku darto.
Step2: Dooro WMA qaab wax soo saarka
Hit "Qaabka Output" icon in ay doortaan qaab wax soo saarka ah ee video kasta barnaamijka ah. In liiska qaab hoos-hoos, waxaad u tagi kartaa "qaab"> "Audio"> "WMA". Haddii aad rabto in aad kuwan QuickTime files MOV barnaamijka inay u dhoofiyaan file a WMA joogto ah, waqtigan, waxaad uun sax "midowdo oo dhan videos galay mid ka mid file".
Fiiro Gaar ah: Waxa kale oo aad jari karaa ilaa aad qaybaha aan la rabin ee file MOV ah. Just riix badhanka Edit ka dibna ku interface goo, kala jabeen video MOV u clips jecel yahay aad rabto.
Talaabada 3: Start QuickTime MOV inay diinta ka WMA
Markii wax walba la sameeyo, hadda, waxa ugu dambeeya ee aad u baahan tahay inaad samayso waa inaad ku dhacay "Beddelaan" si loogu badalo QuickTime MOV in WMA. Markii diinta la sameeyo, waxaa laga yaabaa in aad dib-u-jiidayo faylka WMA diinta app this, iyo riix "Play" button in interface ugu weyn ee ay ku eegaan file WMA ah. Waxaad ka heli doontaa faylka la gediyay WMA leeyahay dherer soosaaray aad rabto iyada oo aan wax cod ah laga badiyay.